गायिका टिका सानुलाई यस्ताे के भयाे ? हेर्नुहाेस् – Khula kura
गायिका टिका सानुलाई यस्ताे के भयाे ? हेर्नुहाेस्
चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका हुन् टिका सानु । उनी घा इते भएकी छन् । गीतको भिडिओ निर्माणका क्र ममा लडेर उनी ग’म्भी’र घा’इते भएकी हुन् । उनको खुट्टामा ग म्भी र चो’ट लागेको छ ।
“जिन्दगीमा सोचेका कुरा भन्दा धेरै त नसोचेका कुराहरू हुँदा रैछन आज को सुटिङ सकिनै ला’ग्दा सामान्य हि’ड्दा हि’ड्दै ल’डे’र खुट्टा फ्या’क्चर भएको छ ।
चाडै काममा फर्किन सक्दिन होला ।” सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले अस्पतालमा उ पचा र गराइरहेको २ वटा तस्बिर राख्दै लेखेकी छिन् ।
अहिले उनको उ पचा र भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको छ । डाक्टरले निको हुनेको लागि २ देखि ३ हप्ता लागेको उनले बताइन् ।
यसैबीच पोर्चुगलका स्टाइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले २०२० युरोकपको गोल्डेनबुटको उपाधी जितेका छन् । उनले खेल अवधिभर व्यक्तिगत पाँच गोल गरेवापत यो उपाधी जितेका हुन् । त्यस्तै इटालीका गोलरक्षक जियान लुइजी डोनारूम्मा युरोकप २०२० का सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घो षित भएका छन् ।
पोखरामा साउन तीन दिन खोप दिइँदै, को-कोले पाउँछन् खोप ? तपाई ले पाउने कि नाई जान्नुहोस